မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ရှိသူ နှစ်သိန်းကျော်ရှိ၊ တစ်ရက်လျှင် လူဦးရေ ၃ဝ ခန်?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ရှိသူ နှစ်သိန်းကျော်ရှိ၊ တစ်ရက်လျှင် လူဦးရေ ၃ဝ ခန်??
”၂ဝ၁၆ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးကူးစက်ခံရသူဦးရေ ၂၂ဝဝဝဝခန့်ရှိပါတယ်။ ကူးစက်ခံရမှုဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးတစ် ပြေးညီ ဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘဲ အန္တရာယ်များသော ဦးတည်အုပ်စုများကို ကူးစက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးကူးစက်ခံရသူအသစ်ပေါင်း ၁၁ဝဝဝ ခန့်ရှိပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် နေ့စဉ်လူ ၃ဝ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးကူးစက်ခံနေရပါတယ်”ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာကျော်ဇင်သန့်က ပြောကြားခဲ့သည်။ အန္တရာယ်များသောဦးတည် အုပ်စုများမှာ မူးယစ်ဆေးအကြောထဲထိုးသူများ၊ အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများနှင့် အမျိုးသားချင်းလိင်တူ ဆက်ဆံသူများဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေး အကြောထဲထိုးသူများတွင် ပိုးကူး စက်ခံရမှု အများဆုံးဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
”မူးယစ်ဆေးအကြောထဲထိုးသူတွေက ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသမီး ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသားချင်းလိင်တူ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ လိင်လုပ်သားများရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်များတွင် ၂၃ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူအသစ်ရဲ့ စုစုပေါင်း၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေပါတယ်”ဟု ယင်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်သူ လူဦးရေများသော ကြောင့် ကူးစက်နှုန်းလည်းများပြား နိုင်ကာ မိခင်မှကလေးကူးစက်နှုန်းများကို လျှော့ချရန်လိုအပ်ကြောင်းသိရသည်။ ”ရန်ကုန်မှာကတော့ မိခင်ကနေ ကလေးကို ကူးတာတွေများတယ်။ ဒါတွေကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်” ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူ ဖြူသင်းက ပြောသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးထိုးသွင်းခြင်း ကြောင့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးကူးစက်ခံရ သည့်နေရာများတွင် ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်ဒေသသည် ၄၇ရာခိုင်နှုန်း ဖြင့် အများဆုံးဖြစ်နေပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိ ကြောင်းသိရသည်။
ပွဲဆက်များခြင်းကြောင့် ရလဒ်မကောင်းဟု ဆိုခြင်းကို စပါးအသင်းနည်းပြ ပိုချက်တီနို လက်မခံ
ခရီးသည်တင်ယာဉ်နှင့် ဟိုင်းဂျက်ယာဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်၊ ယာဉ်မောင်း တစ်ဦးသေဆုံး